GADZIRISA IYI PC HAIGONE KUMHANYA WINDOWS 11 KANGANISO - NYORO
Gadzirisa Iyi PC haigone kumhanyisa Windows 11 Kanganiso
Kutadza kuisa Windows 11 uye kuwana Iyi PC haigone kumhanya Windows 11 kukanganisa? Heano maitiro ekugonesa TPM 2.0 uye SecureBoot, kuitira kugadzirisa Iyi PC Haikwanise Kumhanya Windows 11 kukanganisa muPC Health Check application.
Iyo yakamirirwa kwenguva refu yekuvandudza Windows 10, iyo yakanyanya kushandiswa komputa inoshanda sisitimu pasirese, yakazopedzisira yaziviswa neMicrosoft mavhiki mashoma apfuura (Chikumi 2021). Sezvinotarisirwa, Windows 11 ichaunza kuwanda kwezvinhu zvitsva, zvinoshandiswa zvechivanhu, uye mushandisi mushandirapamwe achagamuchira dhizaini yekugadzirisa, kugadzirisa mitambo, rutsigiro rwekushandisa kweApple, majeti, nezvimwewo zvinhu zvakaita seYakatanga menyu, chiito nzvimbo. , uye iyo Chitoro cheMicrosoft yakagadziriswazve zvizere kune yazvino vhezheni yeWindows. Parizvino Windows 10 vashandisi vanozobvumidzwa kukwidziridzira kuWindows 11 pasina imwe mari yekuwedzera pakupera kwa2021, kana vhezheni yekupedzisira yaitwa kuti iwanikwe kuruzhinji.
Matanho ekugadzirisa kana PC yako Isingakwanise Kumhanya Windows 11 kukanganisa
Zvirongwa zveSystem zveWindows 11
Maitiro 1: Maitiro Ekugonesa TPM 2.0 kubva kuBIOS
Maitiro 2: Gonesa Yakachengeteka Boot
Pamwe pamwe nekutsanangura shanduko dzese dzinounzwa neWindows 11, Microsoft yakaratidzawo hushoma hushoma hunodikanwa kumhanyisa iyo OS nyowani. Izvo zvinotevera:
Iyo yazvino 64-bit processor ine wachi yekumhanya ye1 Gigahertz (GHz) kana yepamusoro uye 2 kana anopfuura macores (Heino runyorwa ruzere rwe Intel , AMD , uye Vanogadzira Qualcomm iyo ichakwanisa kumhanya Windows 11.)
Angangoita mana gigabytes (GB) e RAM
64 GB kana hombe chengetedzo chishandiso (HDD kana SSD, chero chazvo chinoshanda)
Chiratidziro chine mashoma resolution ye1280 x 720 uye yakakura kupfuura 9-inch (diagonally)
Iyo firmware system inofanirwa kutsigira UEFI uye Yakachengeteka Boot
Yakavimbika Platform Module (TPM) vhezheni 2.0
Graphics Kadhi inofanirwa kuenderana neDirectX 12 kana gare gare neWDDM 2.0 mutyairi.
Kuita kuti zvinhu zvive nyore uye kubvumira vashandisi kuti vaone kana masisitimu avo aripo anoenderana neWindows 11 nemuchina wekubaya kamwe chete, Microsoft yakaburitsawo PC Hutano Tarisa kunyorera . Nekudaro, iyo yekuburitsa link yeiyo application haisisiri pamhepo, uye vashandisi vanogona panzvimbo pekuisa iyo yakavhurika-sosi NeiNotWin11 chishandiso.
Vazhinji vashandisi vakakwanisa kuisa maoko avo paHealth Check app vakataura kuti vanogashira Iyi PC haigone kumhanyisa Windows 11 pop-up meseji pakumhanyisa cheki. Iyo pop-up meseji zvakare inopa rumwe ruzivo rwekuti nei Windows 11 isingakwanise kumhanyisa pane system, uye zvikonzero zvinosanganisira - processor haina kutsigirwa, nzvimbo yekuchengetera iri pasi pe64GB, TPM uye Secure Boot haina kutsigirwa / yakaremara. Ipo kugadzirisa nyaya mbiri dzekutanga kuchida kuchinjika Hardware zvinhu, iyo TPM uye Yakachengeteka Boot nyaya dzinogona kugadziriswa zviri nyore.
Iyo Yakavimbika Platform Module kana TPM ndeye chip chengetedzo (cryptoprocessor) iyo inopa Hardware-based, chengetedzo-zvine chekuita mabasa kune ano Windows makomputa nekuchengeteka zvakachengeteka kunyorera makiyi. TPM machipisi anosanganisira akawanda epanyama ekuchengetedza maitiro anoita kuti zviomere vateki, zvinokuvadza zvinoshandiswa, uye mavhairasi kuzvishandura. Microsoft yakaraira kushandiswa kweTPM 2.0 (yazvino vhezheni yeTPM machipisi. Iyo yapfuura yainzi TPM 1.2) kune ese masisitimu akagadzirwa post-2016. Saka kana komputa yako isiri yechinyakare, zvingangoita kuti chip chekuchengetedza chakafanotengeswa mubhodhi rako asi chakangoremara.
Zvakare, izvo zvinodikanwa zveTPM 2.0 kuitira kumhanya Windows 11 yakabata vashandisi vazhinji nekushamisika. Pakutanga, Microsoft yanga yanyora TPM 1.2 sechinhu chidiki chemahara asi ichichinja kuita TPM 2.0.
Iyo TPM yekuchengetedza tekinoroji inogona kutarisirwa kubva kuBIOS menyu asi usati wabhoinura mairi, ngatiitei kuti system yako ive neWindows 11 inoenderana TPM. Kuti uite izvi -
1.Kenya-kurudyi pane Start menyu bhatani uye sarudza Mhanya kubva kumagetsi mushandisi menyu.
2. Type tpm.msc mundima yemavara uye tinya pane bhatani OK.
3. Mirira nokushivirira kuti TPM Management pamusoro Local Computer chikumbiro kuvhura, tarisa Chinzvimbo uye iyo Tsananguro vhezheni . Kana Chikamu chechimiro chinoratidza 'Iyo TPM yakagadzirira kushandiswa' uye iyo vhezheni iri 2.0, iyo Windows 11 Hutano Ongororo app inogona kunge iri iyo inokanganisa pano. Microsoft pachavo vakagadzirisa nyaya iyi uye vakatora chikumbiro. Iyo yakavandudzwa vhezheni yeiyo Health Check app ichaburitswa gare gare.
Uyezve Verenga: Gonesa kana Regedza Yakachengeteka Kupinda mukati Windows 10
Nekudaro, kana iyo mamiriro inoratidza kuti iyo TPM yadzimwa kana kuti haigone kuwanikwa, tevera pazasi matanho ekuigonesa:
1. Sezvambotaurwa, TPM inogona chete kugoneswa kubva kuBIOS / UEFI menyu, saka tanga nekuvhara pasi ese anoshanda application windows uye tinya Alt + F4 kana uchinge wave pa desktop. Sarudza Vhara kubva pane yakasarudzika menyu uye tinya OK.
2. Zvino, tangazve komputa yako uye tinya iyo BIOS kiyi yekupinda menyu. Iyo Kiyi yeBIOS yakasarudzika kune wega wega mugadziri uye inogona kuwanikwa nekukurumidza kutsvaga kweGoogle kana nekuverenga bhuku remushandisi. Makiyi anowanzozivikanwa eBIOS ndiF1, F2, F10, F11, kana Del.
3. Paunenge wapinda menyu yeBIOS, tsvaga iyo Kuchengeteka tab / peji uye chinja kwairi uchishandisa makiyi museve makiyi. Kune vamwe vashandisi, iyo Sarudzo yekuchengetedza ichawanikwa pasi pePamberi Zvirongwa.
4. Tevere, tsvaga iyo Zvirongwa zveTPM . Chinyorwa chaicho chinogona kusiyana; semuyenzaniso, pane mamwe maIntel-akashongedzerwa masisitimu, inogona kunge iri PTT, Intel Inovimbwa Platform Technology, kana kungoti TPM Security uye fTPM pane AMD michina.
5. Gadza iyo TPM Mudziyo chinzvimbo ku Inowanikwa uye TPM Nyika ku Yakagoneswa . (Ita shuwa kuti hausi kukanganisa nechero imwe mamiriro ane chekuita neTPM.)
6. Sevha iyo itsva TPM marongero uye reboot komputa yako. Mhanya iyo Windows 11 tarisa zvakare kuti uone kana uchikwanisa kugadzirisa Iyi PC haigone kumhanya Windows 11 kukanganisa.
Secure Boot, sekutaurwa kwezita, chinhu chekuchengetedza chinongobvumidza software yakavimbika uye masisitimu anoshanda kubhoot. Iyo tsika BIOS kana bhuti renhaka raigona kurodha bootloader pasina kuita chero cheki, nepo chazvino UEFA bhutsu tekinoroji inochengeta zviri pamutemo zvitupa zveMicrosoft uye kuyambuka-kutarisa zvese usati warodha Izvi zvinodzivirira malware kubva mukukanganisa neiyo boot maitiro uye, nekudaro, inoguma nekuvandudzwa kwese kuchengetedzeka (Bhuti rakachengeteka rinozivikanwa nekukonzera nyaya kana uchiburitsa kumwe kugoverwa kweLinux uye imwe software isingaenderane.)
Kuti utarise kana komputa yako ichitsigira iyo Yakachengeteka Boot tekinoroji, mhando msinfo32 mu Mhanya Raira bhokisi (Windows logo kiyi + R) uye rova ​​pinda.
Tarisa iyo Yakachengeteka Boot Nyika chitaridzi.
Kana ikaverenga 'Isingatsigirwi,' iwe haugone kuisa Windows 11 (pasina hunyengeri); kune rimwe divi, kana ichiverenga 'Off,' tevera pazasi matanho.
1. Zvakafanana neTPM, Yakachengeteka Boot inogona kuve inogoneswa kubva mukati meBIOS / UEFI menyu. Tevedza nhanho 1 ne2 dzenzira yapfuura ku pinda menyu yeBIOS .
2. Chinja kune Bhuti tab uye gonesa Yakachengeteka Boot uchishandisa museve makiyi.
Kune vamwe, iyo sarudzo yekugonesa Yakachengeteka Boot ichawanikwa mukati mePamberi kana Yekuchengetedza menyu. Paunenge iwe wagonesa Yakachengeteka Boot, meseji inokumbira kusimbiswa ichaonekwa. Sarudza Gamuchira kana Hungu kuti uenderere mberi.
Ongorora: Kana iyo Yakachengeteka Boot sarudzo yakachekerwa kunze, ita shuwa kuti iyo Boot Mode yakaiswa kuEFI uye kwete Nhaka.
3. Sevha iyo shanduko uye kubuda. Iwe haufanire kugamuchira iyi PC isingakwanise kumhanyisa Windows 11 yekukanganisa meseji.
Microsoft iri kuita zvakapetwa kaviri pasi pechengetedzo nezvinodiwa neTPM 2.0 uye Secure Boot kuitira kuti umhanye Windows 11. Zvisinei, usanetseke kana komputa yako yazvino ikasasangana nehurongwa hushoma hweWindows 11, sezvo kunetsana kune kusawirirana nyaya kuri chokwadi. fungidzirwa kunze kana kuvaka kwekupedzisira kweOS kwaburitswa. Iwe unogona kuzorora uine chokwadi chekuti tichave tichifukidza iwo ekushandira chero nguva pavanowanikwa, pamwe nemamwe akati wandei maWindows 11 maidi.
kuongorora uye kugadzirisa mota yakanamatira pa100
windows 10 kuongorora uye kugadzirisa mota c
yakakosha kukanganisa yako yekutanga menyu haisi kushanda windows 10
mira kodhi kwete zvishoma kana kuenzana
windows 10 netflix isingashande
windows 10 wifi inoramba ichibvisa 2019